Imicimbi yoLutsha lwaBasetyhini ijongene nayo - Ubudlelwane
Imicimbi yoLutsha lwaBasetyhini ijongene nayo
Kulutsha olungqingili, iingxaki eziqhelekileyo zokufikisa zokungena kunye nokufumana uthando zinokuthatha intsingiselo entsha.
Imiba eqhelekileyo yabakwishumi elivisayo
Ukuphuma, okanye ukubhengeza elubala ukuba ulifanasini, kusapho nakwizihlobo kunokuba sisigqibo esikhulu nakubani na, kodwa kunokuba nzima kakhulu kulutsha. Kunokuhenda ukuba ungathethi nto kwaye uzenze ngathi 'uqhelekile', ubuza intombazana kwisithembiso okanye ubambe umdla xa abahlobo bakho bethetha ngabafana abashushu. Nangona kunjalo, akunampilo ukuzifihla rhoqo ngokwenyani kubo bonke abantu abakungqongileyo. Akukhuselekanga impilo yakho yengqondo, kwaye oku kunokuzibonakalisa njengezifo zomzimba ezinjengeentloko.
Izipho zoLutsha eziPholileyo
Imikhwa eli-7 yoLutsha olunefuthe eliPhezulu
Kule minyaka ingamashumi idlulileyo, uluntu luye lwaya luvuleleke kubufanasini, nto leyo ekhokelele ekubeni abantu abaninzi bazive bekhululekile malunga nokuphuma. Nangona kunjalo, ngaphandle kokunyuka kobukho bemithombo yeendaba ngamanani abantu besini esinye, iminyhadala yekratshi, kunye nemikhankaso yokwandiswa kwamalungelo oluntu, ulutsha luza kuhlala lujamelene nomkhethe kunye nentiyo. Kwiyunivesithi nganye evuma izibonelelo zobambiswano lwasekhaya, kukho ukuvota kukarhulumente ukuchaza umtshato njengomanyano phakathi kwendoda nomfazi. Ulutsha lunokuthatha ithemba kuwo onke amanyathelo afanelekileyo kwaye luthathe inxaxheba kwidabi lokulwela amalungelo ngakumbi.
Amalungu osapho anokubuthatha ubufanasini ngokwembono yokuziphatha kunye nenkolo. Kunokuba nzima ngakumbi ukutshintsha ezo nkolelo zinzulu. Abanye abazali bajonga ukuphuma komntwana wabo ngokweendlela abacinga ukuba baphulukene nazo. Umama unokukhala ngokulahleka kwabazukulwana okanye utata angazisola ngokungakwazi ukuhamba nentombi yakhe ezantsi kumtshato wakhe. Nangona kunjalo, emva kokuphendula kokuqala kokuphoxeka okanye ukothuka, uninzi lwamalungu osapho babamkela abantwana babo abathandanayo, abantakwabo, okanye abazala babo ngezandla ezishushu.
Abakwishumi elivisayo banokuziva bengonwabanga xa bephakathi komhlobo osandula ukuvuma ukuba ulifanasini. Banokuba nexhala lokuba umhlobo wabo uza kutsaleleka kubo, okanye ukuba abazithembanga, banokuba nexhala lokuba abanye baya kucinga bona bangamafanasini, nabo. Nangona kunjalo, abahlobo bokwenene baya kuhlala ecaleni kwakho. Yivulele ingxoxo, kwaye musa ukuzikhusela malunga nemibuzo ethembekileyo.
Ulwimi olusingela phantsi
Kuqheleke kakhulu ukuba ulutsha luthi, 'Injalo gay' xa bengayithandi into. Amakhwenkwe akwishumi elivisayo, azama ukugcina umfanekiso oqaqambileyo, angabiza umhlobo athandana naye ukuba wenza into ebonwa njengowasetyhini. Igama lesini akufuneki lisetyenziswe njengesithuko okanye isithethantonye sesiyatha. Musa ukoyika ukuthetha into xa ungqina umntu esebenzisa eli gama ngale ndlela. Ukuba intetho etshabhisayo isetyenziswa ngendlela yobundlobongela kuwe, xela kubaphathi besikolo.
Ezi zixhobo zilandelayo zinokunceda ulutsha olufanasini lufumane inkxaso kunye nenkuthazo. Banokunceda abahlobo kunye namalungu osapho ukuba baqonde ngcono ulutsha olufanasini ebomini babo.
Intsomi ebonisa abalinganiswa abathandana nabantu abathandanayo inokunceda ulutsha ukuba luye nemikhwa yabo yesini okanye lubonelele nje ukufunda okumnandi kunye nabalinganiswa abanokubanxibelelana nabo kunye nemiba ebalulekileyo kubo. Izinketho ezimbalwa ezidumileyo zibandakanya Annie engqondweni yam nguNancy Garden, Inkwenkwe idibana nenkwenkwe nguDavid Levithan, kwaye Amakhwenkwe emvula nguAlex Sanchez.
Abazali, iiNtsapho, kunye nabahlobo bamaLesbian kunye namaGay uthungelwano lwenkxaso ekwabandakanyeka ekukhuthazeni amalungelo esini, ukufundisa ngesondo, kunye neminye imiba enxulumene noko.
Iphepha elipholileyo labaselula beQueer yiwebhusayithi yobuqu egcwele amakhonkco afanelekileyo. Eli phepha lihlelwe ngokujikeleza imibuzo eqhelekileyo enje 'Ngaba kufuneka ndiphume?' kwaye 'Ndenza njani?' kwaye iqhubela phambili ukusuka kwimiba yesazisi iye kwimicimbi ebonakalayo yokuphila njengomntu okwishumi elivisayo. Kukho ne Inqaku elilungiselelwe abazali abafumana isiza kuluhlu lwabantwana lweebhukumaki okanye kwiiwebhsayithi ezisandul 'ukutyelelwa.
Abameli boLutsha , Iqela elijolise kwimicimbi yesini kulutsha, ikwabonelela ngephepha eliluncedo lamakhonkco. Uluhlu lubandakanya imibutho exhasayo, izixhobo ezikwi-Intanethi, iinombolo zomnxeba oshushu, iincwadi kunye neevidiyo.
Ummeli , Indawo yeendaba ejolise kwi-GLBT ibonelela ngoluhlu lweekhonkco kulutsha, ngelixa upapasho luphela lunokunceda ulutsha oluthandanayo ukuba luhlale lunxibelelana noluntu olukhulu lwe-GLBT kunye nemiba ye-GLBT.
Inani elandayo lezikolo lenze imanyano ngqo nezitabane. Le mibutho yabafundi isebenza njengenethiwekhi yokuxhasa abafundi besini esinye ngelixa ivula nengxoxo phakathi kwabakwishumi elivisayo nolutsha ngqo. La maqela anokusebenza nje ngenjongo yezentlalontle, okanye banokusebenza ukukhulisa ulwazi ngemicimbi yesini, njengokugubha iVeki yokuzigwagwisa.
Ingqokelela Yeresiphi Ulusu Care Product Ikhaya Umthengi Ukuhlola Ikhekhe Decorating Techniques Iingubo Zokuhlamba Iimpahla
mdala kangakanani kufuneka ube ne tattoo eKansas
ukusela njani iibhayile cream irish
Ithetha ntoni xa kudanyaza ikhandlela
Eyona ndlela yokucoceka isepha